Ingriisku waxay yiraahdeen deegaanka iyo sii jiritaanku waa arrin muhiim ah marka ay dooranayaan safarka
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Ingriisku waxay yiraahdeen deegaanka iyo sii jiritaanku waa arrin muhiim ah marka ay dooranayaan safarka
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Shirarka • News • Dadka • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka UK
Warshadaha socdaalku waxay mar kale ku kulmaan WTM London
COP 26, oo dhacaysa isla wakhtiga WTM London, waxay keeni doontaa waaritaanka ajandaha ugu sarreeya ee wararka, iyo warshadaha socdaalku waxay u baahan yihiin inay xiisahan u beddelaan ficil.
In ka badan saddex-iyo-afar qof oo socdaalayaal ah oo UK ah ayaa sheegaya in deegaanka iyo sii jiritaanku ay tahay arrin muhiim ah marka ay dooranayaan safarka, ayaa daaha ka qaaday cilmi-baaris ay maanta (Isniin 1-da Noofambar) soo saartay WTM London.
Warbixinta Wershadaha WTM waxay ogaatay in 78% muunada 1000-ka xoog leh ay ku lifaaqeen xoogaa muhiimad deegaanka iyo sii jiritaan. Qiyaastii shan-tiiba mid (18%) ayaa sheegay inay aad muhiim u ahayd, qaarna afar-meeloodba (23%) waxay doorteen wax aad muhiim u ah.
Laakiin jawaabta ugu caansan ee su'aasha waxay aragtay in ka badan hal-saddex-meelood (38%) dadka Ingiriiska ayaa arrimahan ku tilmaamay "wax muhiim ah".
Dhanka kale, waxaa jira dad aad u adag oo socdaalayaal Ingiriis ah oo aan ku qanacsanayn, iyadoo 16% ay meesha ka saareen sii jiritaankeeda oo aan ahayn mid aad muhiim u ah iyo 7% oo aan haba yaraatee sheegin.
Jawaabaha su'aalaha kale ee warbixinta ayaa sidoo kale muujinaya inta badan dadka Ingriiska ah waxay isku dayaan inay u safraan si mas'uuliyad leh laakiin waxaa jira tiro yar oo diidaya inay dhexdhexaadiyaan dhaqanka si waafaqsan.
Waxqabadyada iyo dhaqamada ay ka midka yihiin dib-u-isticmaalka tuwaalada, dib-u-warshadaynta, iyo isku dayga iibsashada badeecadaha iyo adeegyada maxaliga ah ayaa caan ka ahaa muunadda. Si kastaba ha ahaatee, 15% waxay ahaayeen kuwo aan mugdi ku jirin jawaabtooda, taas oo ahayd in aysan ka fiirsan gebi ahaanba deegaanka marka ay safrayaan.
Simon Press, Agaasimaha Bandhigga, WTM London, ayaa yiri: "Warshadaha socdaalku waxay si cad u leeyihiin hab ay ku qanciyaan dhammaan macaamiisha baahida loo qabo in si dhab ah looga fikiro saameynta deegaanka iyo waarta ee safarradeena.
"COP 26, oo dhacaya isla wakhtiga WTM London, waxay keeni doontaa waaritaanka ajandaha ugu sarreeya ee wararka, iyo warshadaha socdaalku waxay u baahan yihiin inay xiisahan u beddelaan ficil. Warshadaha ayaa hubaal ah inay ka go'an tahay inay kaalintooda ka qaataan dhimista isbedelka cimilada."